Afghanistana: Andron’ny Vehivavy Ao Anaty Firenena Misafotofoto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2018 12:01 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ny valo Martsa teo, fankalazana erantany ireo olona mahery fo tsy dia fantatra izay mampandeha ny fiarahamonina. Nilaza ny blaogera Afghana fa nitranga izany, saingy napetrak'izy ireo ho anatin'ny ara-tantara kokoa anefa ny tolona hatry ny ela ho an'ny zon'ny vehivavy.
Maneho ny alahelony i Mohammed Khairy,
Ao Afghanistana, fireneko, manao diabe foana ireo vehivavy ary manao hetsika fanoherana ho an'ny zon'izy ireo. Indrisy anefa, tsy mihaino azy ireo mihitsy ny mpanao politika ary tsy manome tombotsoa azy ihany koa…
Tsy ho ela, ho lasa tafiditra amin'ireo lalao fanoherana ara-politika fa tsy hiasa ho an'ny vehivavy ireo vehivavy Afghana sasantsasany izay nanana vintana ny hanompo amin'ny toerana ambony ao anatin'ilay governemanta Afghana vaovao. Tsy nahomby tamin'ny fanakanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny governemanta Afghana, etsy andaniny betsaka ireo olon-dratsy noraisina hiasa amin'ny toerana samihafa.
Navela hiharan'ny tsy rariny ataon'ireo vady lozabe indray ireo vehivavy Afghana, ny fampanambadiana ankizy kely sy ny fivarotana vehivavy. Mbola manana fahefana ny hanao izay tiany amin'ireo vadiny ny lehilahy, toy ny fampijaliana sy ny famonoana. Araka ny voalazan'ny Komisiona Afghana ho an'ny zon'olombelona, misy vehivavy anjatony maty voatifitra, namidy tamina lehilahy hafa, notapahana ny ampahan'ny vatan'izy ireo, toy ny sofina, orona ary rantsan-tànana.
Etsy ankilany, mahita zavatra maro ho ankalazaina i M. Ashraf Haidari:
Maro zavatra ho ankalazaina ireo vehivavy Afghana amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Nefa, mbola mila ny fanarahamaso sy ny fanohanan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena hatrany ny toedraharaha mampidi-doza misy azy ireo. Eny fa na dia niverina nahazo ireo fahafahana sasany izay very nandritra ny fanavakavahana ny lahy sy ny vavy nataon'ny Talibana aza ireo vehivavy Afghana, mbola anisan'ny vondrona iray izay marefo indrindra ao Afghanistana ry zareo.
Nahavita fandrosoana izay hita taratra ireo vehivavy Afghana nanomboka tamin'ny fahataperan'ny fanavakavahana tsy hay hadinoina nataon'ireo Talibana, fito taona lasa izay.
Manamarika i Nasim Fekrat fa miatrika herisetra mismisy kokoa noho ny tamin'ny fito taona lasa ireo vehivavy Afghana amin'izao fotoana izao:
Mazàna, terena hanambady ireo ankizy kely 7, 8 ary 9 taona. Mahatsiravina ny zava-mitranga ary matetika, voaolana izy ireo. Aorian'ny mariazy, tsy afaka mandeha an-tsekoly intsony izy ireo ary miatrika fahasarotana maro avy any amin'ny fianakaviana sy ireo vadiny. Maro amin'izy ireo ny tsy mahazaka izany toe-javatra henjana izany, ka mandoro tena na mamono tena izy ireo.
Manodidna ny 87% ireo vehivavy no mitaraina noho ny herisetra an-tokantrano, ny antsasany amin'ireo iharan'ny herisetra ara-nofo ary ny 60% maherin'ireo mariazy dia an-tery daholo.
Etsy andaniny, namela vehivavy mananotena sy kamboty an'arivony ny ady amam-polopolo taona. Amin'izao fotoana izao, maro amin'izy ireo no mangataka eny amin'ny arabe. Nentina tany amin'ny fitaizana zaza kamboty sy toerana fiarovana ny sasany amin'izy ireo.
Nanome fijoroana vavolombelona mitovitovy amin'izay i Hadi1121.
Fa tsy izay rehetra eritreretina anefa ny andron'ny vehivavy. Tantarain'i Sanjar fihetsiketsehana tany Mazar-i-Sharif momba ny fanehoana an-tsarimiaina ny Mpaminany Danoà :
Tsy hoe tsy dia mahazo tsara ilay krizy fotsiny ireo relijiozy sy ny governemanta Afghana, toy ny fanaon'izy ireo mahazatra amin'ny krizy, fa feno fihatsarambelatsihy be ihany koa. Ireo firenena izay namoaka ilay fanehoana an-tsarimiaina no mamatsy vola ny tetibolan'ny governemanta ary, mazava, i Afghanistana. Maninona no mandray ny fanampiana avy amin'izy ireo ianao kanefa manohitra mafy ny soatoaviny. Fialàna bàla hafa ho an'ireo mollah ilay fanehoana an-tsarimiaina, toy ny tamin'ny elatra havanana any Andrefana, mba hanamafisana ny vahohon'izy ireo amin'ny fiarahamonina. Hevitra avy amin'ireo mollah sasany irery ihany ireo fihetsiketsehana, toy ny androany, ary manana tanjona voalohany ny hamoritra ireo singa tonitony fihetsika ao anatin'ny fiarahamonina Afghana, raha misy izany zavatra izany.
Manamarika i Hadi1121 fa toy ny efa voavalin'ny seho an-tsehatra “American Idol” amin'ny endrika ilalaovan'ny ao Afghanistana azy ireo fanontaniana marobe rehetra momba ireo foko vitsy an'isa.
Afaka miresaka mandritra ny tontolo andro isika hoe manao ahoana ny fanehoana ireo foko samihafa amin'izao fotoana izao ao amin'ny parlemanta sy ny govenemanta, inona avy no vita sy/na narian'izy ireo tsirairay avy, ny tena misy dia tsy mifampatoky tsotra izao ireo vondrona samihafa ireo ary amin'ny tranga sasany tsy mifankatia. Mbola toy ny mpihaza hatrany no fahitan'izy ireo ny hafa, vonona ny hamonotra ny zo sy ny fisian'ny hafa. Na momba ny fifidianana filoham-pirenena io, na parlemantera na filankevitra ao an-toerana na fifdianana ny Kintana Afghana, matetika, eritreretina ho toy ny solotenan'ny vondrony sy ny fokony foana ireo kandidà fa tsy mpanakanto mandeha irery mifaninana miankina amin'ny talentany.
Farany, manoratra momba ny tetikasa artistika iray i Kabulistan izay nisarika ny sain'ny maro tany Hôlandy momba ny fitarainana mahakasika fiakaran'ny isan'ireo miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina.